Manome Voninahitra An’i Maria Magdalena Amin’ny Talenta Poerto Rikana Ireo Mpanakanto Matihanina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2013 23:29 GMT
Na tsy azon'ny mpijery sasany aza [izay ataony] dia nomen-kaja amin'ny endrika vaovao, amin'ny alalan'ny ezaky ny aingam-panahin'ireo artista tahaka an'i Tanya Torres sy Raquel Z. Rivera, izay nandany taona maro namantatra ny fiakaran-danjan'ity olo-malaza ity tao anatin'ny kanto hiso, mozika, ary ny asa-soratra kristianina mpijery i Maria Magdalena, olo-masina katolika sy olo-malaza ara-tantara.
Tamin'ny 21 Jolay, andro alohan'ny fety ofisialin'ity olo-masina ity, nanasa ireo “mpino, tsy mpino, manakaiky ny ho mpino, sy mpino ihany, ary ireo izay tsy voatonona ao amin'ireo nosokajiana teo ireo” ireo mpanakanto ireo mba hoavy ao amin'ny Fiangonana Masindahy Marka-in-the-Bowery (Saint Mark's Church-in-the-Bowery), eglizy malaza amin'ny karazan-javakanto andrana ao New York, ka handray anjara amin'ny fankalazana ny fampanantenana mahafinaritra natokana ho an'ilay olo-masina.
Fotoa-pivavahana no nanombohana ny fety, ravahan'ny hira ao amin'ny kapila mangilatr'i Rivera “Los 7 Salves de la Magdalena”. Avy eo, nifindra tany amin'ny sehatra hafa ny mpankalaza hilalao, hihira, sy handihy “lamako” ( “Arahaba ry Maria” an-kira), bombas, ary palos (dihy nentim-paharazana Porto Rikana). Noraisin'i Torres izy ireo tao, izay te-hiresaka mafy momba ny zava-kantony vao haingana indrindra nalaina tamin'ny tantaran'i Maria Magdalena, izay inoan'ny sasany ho sakaizan'i Jesosy.
Ao amin'ny Hoy, artista, bilaogy nosoratan'ilay mpanoso-doko Tanya Torres no hahafantaranao bebe kokoa momba ny hetsika fankalazana ny fampanantenana. Zarainay aminareo ireto sombin-tsary nalain'ireo vahiny roa anisan'ny tamin'ireo nasaina ireto…
Nametraka lahatsary nalefan'ny vipblessings [es] ihany koa izahay mba ahafahanao mihaino ny mozikan'i Raquel Z. Rivera & Ojos de Sofía, izay nosokajian'i Felix Jiménez [es] am-pahamarinana ho “sahisahy” tamin'ny lahatsoratra vao haingana mitondra ny lohateny hoe 80 Grados. Tamin'ny taona 2010 no natao ny lanonan-takariva fampahafantarana ny kapila mangilatr'i Raquel tao amin'ny eglizy masindahy Marka ao Bowery, ary nampahafantarin'i Tanya Torres voalohany tao ihany koa ny mozikany sy ny tetikasany ara-maso [es]
Na dia izany aza, mbola tsy nifarana tanteraka izany fety fankalazana an'i Magdalena izany. Androany 9 Aogositra, hanatontosa fampiratiana ireo “karazana hosodoko mampiseho ny fahambonian'Andriamanitra eo amin'ny tontolo voajanahary; ao anatin'ny dia irosoany, ahitan'i Torres ny fifandraisana amin'ny sariohatra masina nentim-paharazana.” Hampahafantarina ao amin'ny Efitrano fampirantiana Bright Rain, ao Albuquerque, Meksika Vaovao, tranon'ny mpiara-miasa aminy, Raquel Rivera ny haikanto, mitondra ny lohateny hoe Ny Lanitra sy ny Tany. Afaka hiaina ny kanto amin'ny alalan'ny loko sy ny feo ireo olona hoavy hanatrika ny fampiratiana.